Xildhibaan Yaasiin Cabdi Seed: “Dastuurka waa la dhammaystirayaa ka hor 2016-ka” – Radio Muqdisho
Xildhibaan Yaasiin Cabdi Seed: “Dastuurka waa la dhammaystirayaa ka hor 2016-ka”
Xildhibaan Yaasiin Cabdi Seed oo ka tirsan guddiga dastuurka ee baalrmaanka ayaa sheegay in howsha dib u eegista dastuurka ay dhammaan doonto ka hor sanadka 2016-ka oo la filayo in doorasho ay ka dhacdo waddanka.
Isagoo ku sugan magaalada Kampala ee dalka Uganda ayuu u sheegay VOA, in dhawaan la bilaabi doono dib u eegista cutubyada dastuurka qaarkood, kuwaas oo bud-dhig u ah qabashada howlo badan oo muhiim u ah in doorasho ay ka dhacdo waddanka.
Xildhibaanku wuxuu sheegay in sharciga axzaabta, dhismaha maamul-goboleedyada iyo dhammaytirka guddiyada madaxa bannaan ay yihiin kuwo aasaas u ah hiigsiga 2016-ka.
Sharciyo badan oo xiriir toos ah la leh doorashooyinka iyo dhammaystirka dastuurka ayaa horyaalla baarlamaanka federaalka ah, sidoo kale waxaa shaqo bilaabay guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka oo wada shaqeyn wanaagsan la leh guddiga dastuurka ee baarlamaanka iyo wasaaradda garsoorka iyo caddaaladda.
Hadaba Sidey Kooxaha ugu Kala Guuleystay Super Cup-ka Dalka Talyaaniga?
Dhagayso Khudbadda Madaxweynaha Soomaaliya